Author: Faubar Vimi
Dalaal iyo been madow Inaad saamo jiiddiyo sanqadhtirasho kala daa. Dibno iima gooyaan Dakanooyinkaygee Laba daw mid iga xidhan Iga dayrsan nacasnimo Iga deyran lahashadu Iga duuban googoos Boholyowna iga dedan. Hadday saancad dunidii adoo sayn cad kugu tahay saymaheedu meel buu Ilaa saaka kuuyiil haddaan sooryo waayeel sanku neefle kuu hayn cid baan saaf la dheegtiyo xadhig soohan kaahayn. Hadalkana nin yidhi wa dhigaa siidhehbaa dilay Inaan dhaabadeeyaan rabaa dhawr kal dabadeed Dhaxalkeeda nimankii lahaa way dhebaandhebi Iyagaa dharaarab intaan dhaafay sii odhan.
Gedgeddoonka Laanjeer, Gubashada xiniinta leh, Weligii ma gamashiyin, Gorti loo badheedhiyo, Cabdi Bucul ma gaasirin, Gelin qudha rugtiisii, Maxamuud gandoodkii, Wuxuu geydh la sara kacay, Manjo-goror ku taar taar. Gurdan-raaca ubadkiyo, Gulufkeenna kala lumay, Gashigeenna weli maqan, Horta godobta yaa qaba? Duqri may maqlaysaa Daratiyo kud iyo caal Durey iyo kul iyo daaf Waxaad duumo hidisiyo Waxaad hayso daacuun Annagaa daweynee Dabaq qudha isugu gee Ha ka tegin duruustey Rag isaga danbeeyeen Isku soo daroo keen Cirka sare badh soo dumi Waxaad hayso soo daa!
Wixii lumay aynabkaaga, Asluub iyo dhaqan lahayn, Aflow gooli baadhkii, Gololada sarbeebta ah, Gararkuu ku tixi jiray, Iyana waa ma guuraan. Hadday gaajo kulushahay, Asaan gowska loo hayn, Murti guun ah deeqsii.
Gudmo biyo cas, Gacan-sheyliyo, Gaacir iyo Soomo, Guutada halkaas lagu yiqiin, gororinteedii dheh! Muddadii xilka lahayd Haddii maamulkaygii Malaa kadeed iyo Mixnad iyo shil laga dhigay Maankayga garashada Maaraynta hawluhu Siday iigu muuqdeen Waxba inanan maandhaw Ku masuugin baanfuray Inta maqanna gaadhsii. Unuunka dhirtaad ka goysay, Hadduu laba-aabudh saaray, Geyigaygu waa kow intuu, waajib ii vabayada Dhulka kale intaan gaadhi karo, waw gol leeyahaye Adduunyada go’doon kagamajiro, garangar loo yaalle Garaadkaygu waa dhaafsan yahayxaajo goboleede Dareenkaygu gooddiga sibuuii gilgilayaaye Guhaad iyo canaan buu hiyigu, ii gab-leeyahaye Inta garasho ii meel la’dahaytayda maan gudane Hadba waxan galiilyoonayaa, goobo lay tebaye Asaaggay wuxuu galo ayaananigu gooyaaye Anigiyo kuwii lagu ganayada, waa gabaywda Qayrkay babayada guul suntaday, gooni iifarane Nin kastoo ganbadu saarantahay, dunida guudkeeda Gurmadkayga waw baahanyahay, ruux la gaasiraye Taydana ninkii igu guntadey, waw gar leeyahaye Marba gooha dhiillada halkii, igu galoollaata Karaankayga waan geyn intaan, geeri moogahay Waxa ina rag ii guulayaatiisa gaarka ahe Anna waxaan go’aansaday inaan, lay gaboodfaline.
Awaaraha jiifa daawo; Haddaad ummad liil ka weydo, Tifatirayaasha Farshaxan way ka madax banaan yihiin fikradaha gaarka ah ee ku sugan halkan.
Wuxuu taa ku sii daray Tarmi weydey beentaan Taabba geli is idhiyoo Tiradaydu meel bay Ka takoorantahayoo Marka aan toddoba jeer Toban toban u geeyaba Taf kalaa furmaysoo Wadar aanan filanayn Iska kay tusaysee Bal tabaaladaa daya! Habliyo ubixii dalkeenna, Midha-Daray raggiinaa Duudduub ku liqayow Kolley geedka duuggiyo Taariikh la daastiyo Laga diirto magac hadha Sida diirta xagatoo Dadnimada arradisee Dib maxaa u gabayaa Duniduba ma maantaa?
Afkii cunay quusan waaye, Adduunka la qaybsan maysid, Agtaydana jiifi maysid, Sange orod la dabagalo salyar buu u necebyahay codka salalka bayrtiyo Dadka qaar sacsacanoo sirqa ba,an ku noqotoo marba suuf ku dedayoo sawirkeeda necebyahay.
Ma abaabul shar baa!? Dal hadday ku badan tahay Deldelaada dhimashadu Dabar go’u bannaan yahay Hub markaaba soo dega Dawladiisu waa caan Inaan doorkan maanta ah Deeqdas cid kale bixin Dunidu way ogsoon tahay.
Dhirtuba kala ayni weeye, Maxaa duunyo weli nool? Gunnimayna haysee, Miyaynaan gob noqon karin? In qaawan, intii sawaaban, Agtooda hadduu fadhiisto, Danta guud mudnaanteed Gobonnimo daryeelkeed Damaciyo hankaygii Haddaan waayey dawgaan Is lahaa ha lagu dego Berri degel ma dhaafaan Dadka wada jirkiisiyo Isku duubnidiisii Lagu doorshey reer reer Kala daadsan laga dhigay Mus duleedku xanan yahay Qarannimadu dagan tahay Gudahana dab kaga kacay Dawankiyo carooggiyo Miyaan waayey Daalacan Sengehayga Doolaal Ama faras dirkiisa ah Dayax-weerar oo kale?
Haweenkuna waa duggaal Muqdishiyo Hargeysaay Cirka meelo ka onkodey Milliqsiga hillaaciyo Hanqarkiyo mardaaddiga Meexaana carashada Majaraha ha dherersado Maanshaynta gobollada Maadhiinka gaaxdiyo Miyi sumuca haw xidho Ha ku fido magaalada Dalka subax ha wada maro Ha ka maydho daafkiyo Meegaarka qaybtiyo Waabayda lagu mudey Mirta hawgu kuur galo Habartii masayrrey Halka macandideediyo Maxasteedu yaalliin Ha jabsado misciriraha Ha dhufsado mareegaha Maqashana ha kala tago Iyadana ha maraqsado.
Wax diiddo markay jirtaa Sisin iyo ku beer muufo Iyo laanta saytuunka Ku qotomi sungaan waarta Iyo nabadda seeskeeda Samo iyo ku doon heedhe Dunidiyo sinnaanteeda Ku dawee sawaaceenka Iyo siica daacuunka Ku burburi sarbaa mooska Iyo soohdimaa meersan Ku midee samuud raaca Midabada la sooc soocay Dadkan tobanka saamood leh.
Rabbow gsbayada weyn Marka aad nin hiilloo Laga baqo hashiisiyo Halyey diran dhashaa baa Hooyo lagu xasuustaa Marka aad nin hoo-loo Gurigiisa habaqluhu Isku soo halleeyoo Hayntiisa quudhoo Hor Illaahay geystiyo Lama hure dhashaa baa Hooyo lagu xasuustaa.
Inaan gabadh madow ahay cadrad lagu gabbood yahay malaa waad i garateen?
Waan soo socdaa kowdhe waxna hadraaawi sidaa labo dheh samir yeelo weligaa Saxarlaay ha fududaan. Kuye “daayinkiisii Denbi dhaaf ha siiyee Sawti duugti loo qalay Ducadii adoogeen” Wuxuu yidhi “duqeennii Degta inagu sidi jirey Isaguna ma dubuq yidhi? Addoonka addoonka maagay, Tiradaa gedmaysoo i galaa baxaysee maxaa goolal igu maqan?
Intaydu ku deeqi mayso, Ma wax qiiro kiciyoo Laga qoomamoodaa?
Next story ENDODERMO DEFINICION PDF
Previous story LAVANYA RAMANICHANDRAN NOVEL PDF